Amma maalin jedha maaluman dubbadha Dubbiin gara galtee tam irraa qabadha? – Welcome to bilisummaa
Amma maalin jedha maaluman dubbadha Dubbiin gara galtee tam irraa qabadha?
Arra maalin dhagahe
maaltu maal ta’e?
Mataan na oowwee
garaan na boba’ee
Teenya tun na dhibdee
maaltu nutti bu’e?
Akkan hin callifne
garaan na gubatee
Akkan hin dubbanne
ji’a saddeet taatee?
Har’a tan jaaramte
Tan abdiin eeggannus
tan itti dhadhahanne
tan itti dhadhaaddanne
Maaltu nutti bu’ee
tana hunda mudanne?
Duuba Iccitii maaliitu
Dubbii ifa baasaa
callisuun maa taate?
Namuu tokko tokkoon
harka keessaa fuudhee
Duubaan maaltu jira
maaltu akkas godhe?
Bilisaan Ifaan ifatti
dhugaa sabaaf himaa
Akkas ta’uu baannaan
teenya humaa humaa.
Fala haa barbaaduu
namuu huluma jirutti
Callisuun hin taatu
dhimma nu maraatii!
Tags omn Sirkan Ahmed walaloo
Previous IBSA BOORDII OMN IRRAA KENNAME
Next Atileetotii Naannoo Oromiyaa Addunyaa Fiigichaan Moohumatti Jiran